Stoke oo ka naxsatay Manchester City - BBC News Somali
Image caption Laacibka Diouf ee goolka Stoke dhaliyay
Chelsea si fiican ayay u badinaysaa. Manchester City waa laga badiyay, Manchester United-na barbardhac ayay gashay.
Kooxaha West Ham, West Brom iyo Everton waa laga adkaaday Sabtidan.
Ciyaaraha ugu dambeeyay waxaa loo kala badiyay:
Chelsea 6-3 Everton waxay ahayd ciyaar furan oo weerar ku dhisan hase ahaatee difaaca Chelsea ayaad moodeysay inay jilicsan yihiin maadaama dhowr jeer laga daba yimid goolasha ay weerarkoodu dhalinayeen.
Chelsea goolka ugu horreeyay iyo kan ugu dambeeyay ciyaarta waxaa labadaba u dhaliyay laacibka ay dhowaan soo gateen ee Diego-Costa oo saddexdii kulan ee uu saftay aan midnaba gool la'aan bixin.
Ciyaarta ugu xiisaha badan waxay ahayd mid dhexmartay Manchester City iyo Stoke City, taas oo Man City looga naxsaday 1- 0. Halka gool ee ciyaartaas ka dhashay waxaa Stoke u dhaliyay laacibka Biram Diouf oo
weerarka uga dheela. Si aad u qurux badan ayuu ula dhaafay difaaca Manchester City kana hoos bixiyay goolhaye Jo Hart.
QPR 1- 0 Sunderland
Swansea 3- 0 West Brom
Natiijooyinka kulammada Sabtidan waxay muujinayaan in horyaalka Ingiriiska uu yahay kan adduunka ugu xiisaha badan looguna daawasho iyo dhegeysi badan yahay maadaama aan la saadaalin karin sida ay kooxuhu u